Guddina sadarkaa ramadaanaa Guddina sadarkaa ramadaanaa - articles
1-inni ji'a qur'aanni isakeessatti buufame tahuu, kun waan jiini kun ittii sadarkaa guddaa argate keessaa kan hangafaati.
2-Isa keessa hulaan jannataa ni banamti.
3-hulaan ibidda jahannam nicufamti.
4-Isa keeysa sheyxaanni nihidhamti,
kanarratti Abii hureyraan r.a. nabiin s.a.w. akkana jedhan jedhe ''yeroo ramadaanni dhufe hulaaleen jannataa nibabbanamti,hulaaleen ibidda jahannam nicuccufamti,sheyxaanonni nihidhamti.'' Bukaarii fii muslimtu odeesse.
5-Isa keessa halhan murtii tu jira. Isiin ji'a kuma tokkorra caalti, Rabbiin s.w. akkana jedhe,
nuti isa buufne halkan murtii keysatti. maaltu sibeeysise halkan murtii maal akka taate?,halkan murtii baatii kumatokkorra caalti,malaaykaalee fii ruuhis isii keessatti hayyama rabbi isaaniitiin gadi bu'an,isiin nagaya hanga fajriin bahutti (bari'utti)
6-Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan '
'isiniif dhufe jiini ramadaanaa, ji'a barakaa heddummaatu, kansoomana isaa Rabbiin dirqama isinirratti godhe, isa keessa hulaan samii banamti,hulaan jahiim (ibidda azaabaa) nicufamti, isa keessatti shiftootiin sheyxaanaa nisakaallamti, isa keessatti halkan baatii kuma caalu tokko Rbbiif taheeti jira, namni toltuu isii hongayee dhugumaan kasaare.
7-nami iimaanaa fii abdii Rabbiitiin soomane araarama argata.
8-namni iimaanaa fii abdii Rabbiitiin dhaabbate (salaate) araarama argata.
9-Namni iimaanaa fii abdii rabbiitiin leylatulqadri dhaabbate (salaate) araarama argata.
Abii hureyraan nabiirraa odeessee akkana jedhan jedhe ''namni leylatalqadri imaanaa fii abdiin dhaabbate badiin isaa ta dabarte hundi araarama isaaf godhamti, namni iimaanaa fii abdiin ramadaana soomane baiin isaa ta dabarte hundi araarama isaaf godhamti,
''namni Ramadaana imaanaa fii abdiin dhaabbate badiin isaa ta dabarte hundi araarama isaaf godhamti,
Abii hureyraan nabirraa odeessee akkana jedhan jedhe ''salaanni shaman tuun hanga taaniitti, jum'aan hanga jum'aatti, Ramadaanni hanga Ramadaanaatti hayxuudha (Balleessarraa araarama namaaf taati)''
10-umraan isa kessaa hajji nabiin wajji godhatetti qixxoyti. Nabiin s.a.w. akkana jedhan''umraan Ramadaana keessatti taate hajjii naan wajji taatetti qixxaatti'' muslimtu odeesse
11-Ibidda jahannamirraa namni bilisoomfamu ramadaana keessa heddudha. Abii umaamaan nabirraa odeessee Akkana jedhan jedhe '' yeroo soomana furan hunda warra Rabbiin ibidarraa bilisoomsuutu jiraa'' ahmad tu odessee.
Hadiisa biroottii-''yogguu halkan duraa ramadaanarraa tahe seene sheyxaanotii fii shiftootiin jinni nihidhamti,lallabaan nilallaba yaa katoltuu barbaadu asdeebi'ii itti jabaadhu, yaa ka hamtuu barbaadu ufqabi, Rabbiin warren ibiddarraa bilisoomsu qaba, sun halkan hunda keessatti.'' Tirmiiziyyiitu odeesse.
12-muslima hundaaf kadhaa qeebalamtuutu jira guyyaa Ramadaanaa hunda. Nabiin s.a.w. akkana jedhan ''Halkaniif guyyaa ramadaanaa keessa rabbiin warra ibidda azaabaarraa bilisoomsu qaba. ammas muslima hundaaf kadhaa qeebalamtuu taateetu jira halkaniif guyyaa ramadaanaa keessatti.'' Bazzaartu odeesse.
13-inni boojuu (Badhaasa) mu'iminaati nabiin s.a.w. akki jedhan ''jiini ramadaanarra isaaniif caalu mu'imintootatti takkaa waa hindhufne, jiinii ramadaanarra hamaa munaafiqootatti waa hindhufne, kun akki itti tahuu dandaye mu'iminni ibaadatti jabaataa munaafiqni ibaadarraa laafa, tanaaf milkii mu'imintootaa hoongoo munaafiqootaati''ahmad odeesse.
Seera Soomana Ramadaanaa 34